Badhida Boqeeda Dumarka Laga Buuxiyo - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Badhida Boqeeda Dumarka Laga Buuxiyo
iftineducation.com - Sida ay u badan yihiin haweenka aad bay uga xanuunsadaan falkan, waayo meesha aad bay u yartahay geedka ninkana waa weyn yahay, marka xanuun ayay kala kulmaan, laakin naagaha jecel in dabada laga waso maxaa u keeno arintaas?.
Runta marka laga hadlo waxaa jirto wax la dhaho caadeysasho, haddii haweeneydu ay la qabsato falkaas meesha ayaa u baranayso, marka waxay rabtaa in laga fuulo, bilcaanta futada weyn waxaa la sheegaa raga aad bay ugu soo jiitaan galmada dabada, wadamada ugu badan galmada futada laga sameeyo waa dalka Brazil.
gabar naas weyn leh
Haweenka ugu dabada waaweyn ayay ka mid yihiin naagaha dalkaas, gabdhaha dalkaas badankooda gadaal baa laga cunaa, naagta gadaal dhiibato waxaa lagu gartaa afka dabadeeda oo weynaada, boqa wuxuu yeelanaa astaamo madow, hawenka somali yurub ku nool ayaa ad uga helo wasmada noocaas ah.
Xanuun iyo raaxo isku jiro ayay dareemaan marka loo galiyo geedka, labo isku jira lama arag oo nab isku dhahay labadaas aan ahayn, siilka haweenka buuranna aad buu uga kulul yahay kan kuwa caataha ah, weyna dhici kartaa inay noqoto gabarta caatada ah mid aad u kulul.
Gabadha maku biyabixi kartaa istimaalka gadaal? naagaha kacsiga badan aad bay uga biyao baxaan marka laga galiyo geedka dabada, haweenka qaar raaxo culus ayay ka dareemaan gadaal, waxay sii rabaa wax aad u weyn. weliba naago ayaa jiro ku macaansado in biyaha futada loogu shubo.